Madaxwaynaha oo qabtay shir deg deg ah oo loogu digayo Ciidanka DF. - Caasimada Online
Home Warar Madaxwaynaha oo qabtay shir deg deg ah oo loogu digayo Ciidanka DF.
Madaxwaynaha oo qabtay shir deg deg ah oo loogu digayo Ciidanka DF.
(Mogadishu, Somalia,November,25,2012) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta la kulmay dhamaan Taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha sar-sare.
Kulankaas ayaa waxaa ka soo qeybgalay Raisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) , Wasiirka Gaashaandhiga Mudane C/Xakiim Fiqi, iyo Wasiirka Arimmaha Guddaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdi Xakiim Xuseen Guleed.
Ugu horeyntii Madaxwenyanaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa tacsi u diray dhamaan wiilashii iyo gabdhihii ka geeriyooday Ciidamada Qalabka sida una dhintay dalkooda iyo dadkooda. Sidoo kale wuxuu u mahad celiyay kuwa habeen iyo maalin u taagan in ay dalkooda iyo dadkooda difaacaan.
Kadib markaas ayaa laga hadlay ujeeddada kulankaan oo aheyd in la saxo qaladaad dhaco taasna ay muhiim u tahay isbedelka cusub ee Dowladnimo.” Dowlanimo waa kalsooni, wanaag, iyo sharaf.Askariga dadka halaga illaaliyo hana lagu illaaliyo”.Waxeey taarikhdu xustay in qoladda ay shacabka la jiraan ay ku guuleystaan dagaalka saas darteedna layska qabto kuwa fara kutiriska ah ee xun ee ciidamada ku dhex jira.
“Qofkii qof dilaa waa dil.Kufsigana waa dil” shareecada islaamka ayaa saas qaabto Qanuunkana waa dhaqan gelinaynaa meeshaas ayey naga joogta ayuu Madaxweynaha qudbadiisa ku sheegay.Xanuunka meel xun uu gaaray gabdhaheena waa sharafteena, cidii kufstana waa dil uma dul qaadaneyno.
Ugu danbeyntii ayaa wuxuu sheegay in isbaaro ama jidgooyo la sameyn karin oo cida kaliya oo lacag aruurin karto ay tahay Wasaaradda Maaliyada. Halkaasna ciidamada Qalabka sida waxey ku balan qadeen in ay la dagaalamayaan cid walbo oo sharafta qaranka, umadda iyo amniga ku xad gudubto.